ल हेर्नुस यस्तो पारा छ जाजरकोटमा, फोन गर्न अग्लो डाँडाको पनि अग्लो रूखमा चढ्नुपर्ने! – PathivaraOnline
Home > प्रविधि > ल हेर्नुस यस्तो पारा छ जाजरकोटमा, फोन गर्न अग्लो डाँडाको पनि अग्लो रूखमा चढ्नुपर्ने!
admin October 31, 2019 प्रविधि, बिजनेस	0
जाजरकोट, १४ कार्तिक । जाजरकोटसँग सीमाना जोडिएको डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका–६ का लेखबहादुर बुढा आफन्तसँग फोन गर्न कोठाना लेकमा जाने गर्छन् । तीन घण्टा उकालो हिंडेर गाउँभन्दा माथि हिमालमा पुग्नु उनको रहर नभई बाध्यता हो । आफन्तको खबर बुझ्न र घरको कुरा जानकारी गराउनका लागि उनी दैनिक कोठाना जाने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म जस्तै यहाँका सबै मानिस फोन गर्न तीन घण्टा हिमाल चढ्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
के गर्नु ? आफन्तको खबर सुन्न मन लाग्छ ।’ त्यस्तै मुड्केचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही पनि सदरमुकामलगायत अन्य ठाउँमा फोन गर्नुपरेमा यही लेकमा पुग्ने गरेको बताउँछन् । दैनिक फोनमा धेरै काम पर्छ, त्यसैले कोठाना डाँडामा पुग्नु बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
फोन नभएकाले स्थानीय सरकारका कामदेखि प्रहरी चौकीमा समेत सूचना आदान–प्रदान गर्न मुस्किल भएको छ । अग्लो हिमाल र अग्ला डाँडामा रहेको ठूला रुखको टुप्पोमा गएपछि त्रिपुराकोटमा रहेको टावरले सामान्य काम गर्ने भएकाले त्यहाँ गएर फोन गर्ने गरिएको नर्कुका सोमराज शाहीले बताए ।
फोन नहुँदा जहाँ पनि हिंडेर गई खबर गर्नुपर्दा निकै दुःख भोग्नुपरेको प्रहरी कार्यालय इलले जनाएको छ । जाजरकोटको सीमानासँग जोडिएको मुड्केचुला गाउँपालिका जुम्लाको सीमानासँग पनि जोडिएको छ । कठिन भूगोल रहेको यस क्षेत्रबाट सदरमुकाम जान दुई दिन लाग्ने गर्दछ ।
मुड्केचुला गाउँपालिकामा जोड्नका लागि ल्याइएको नेपाल टेलिकमका सामग्रीहरु रुकुमको त्रिवेणीमा करीब दुई वर्षदेखि थन्किएका छन् । भारतीय कम्पनीले जाजरकोटलगायत डोल्पाका अधिकांश ठाउँमा नेपाल टेलिकम टावर निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम नगर्दा समस्या हुँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । जति पटक ताकेता गरे पनि टावर निर्माण कम्पनीले नटेरेको उनको भनाइ छ ।
छठपर्वको पहिलो दिन ‘नहाय खाय’ विधि यसरी गरिँदै
प्रधानमन्त्रीको आज पनि घर नफर्किने, अझै केहि दिन बस्नु पर्ने जस्तो छ कारण!
फेरि खलङ्गाबाट १६ बर्षिय जोशीले दिए नेपालीहरूलार्इ यस्तो खुशीकाे खबर